Dubartoonni teessuma isaanii furdifachuuf yaalan du'aa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman teessuma isaanii gabbifachuuf yaalii isaan hin taasifne hin jiru. Yeroo teessuma isaanii furdifatan kana mudhiin isaaniis qallatee kan mudhiin mudhii migiraa ykn mudhii soonsaa jedhaman ta'u jechuudha.
Miidhaga yaadanii miidhama hin yaadatan akkuma jedhamu, miidhagina kanaan milkaa'uun tola hin dhufu. Wallaansa baqasanii hodhuufi kan biroo ni qabaata. Dhukkubbiirra darbees amma amma lubbuun akka darbullee taasisaa jira.
Torban kana keessa dubartiin lammii Biriteen miidhagina baqaqsanii hodhuu "Teessuma Biraazil" (Brazilian butt lift (BBL)jechuun masoodhaan waamamu kana taasifataa osoo jirtuu duuteetti. Dubartiin tessuma furdifachuun duute kun Biriteenirraa lammaffaa ta'uu isheeti.
Teessuma furdifachuun kun dubartoota Holiiwuud keessa hojjetaniin kan baratamedha.
Kana waan ta'eefis dubartoonni baayyeen warra Holiiwuud keessaa kana ilaaluudhaan gara wallaansa sadarkaa isaa hin eeggatiin deemu.
Akka gabaasa qorannoo Waldaan Miidhaginaaf Baqaqsanii Hodhuu Biriteen baase agarsiisutti dubartoota kuma sadii keessaa tokko baqaqsanii hodhuu teessuma furdifachuutiin lubbuun ishee darba.
"Teessuma Biraazil" ykn Brazilian butt lift (BBL) kan jedhamu kun adeemsi isaa cooma qaama ofii bakka biraa irraa muruudhaan teessuma irratti lalaxxafuudha.
Kan dubartoonni akka du'an taasisus foon coomaan qaama bakka biraarraa muramee teessumatti yeroo laxxafamutti dhiigni haalli ittiin deemu baayee danqamuudhaan.
Jiraattuun Welsi ganna 23 taate akka BBC'tti himtetti erga bqaqsanii hodhuun teessuma gabbifachuu taasiftee rakkoo fayyaatiif saaxilauushee dubbatti. "Amma mataasaa sirriitti deemuu dadhanaab jira," jetti.
Goodayyaa suuraa Kiim Kaardishiyaan dubartiin beekamtii beekamtuu teessuma ishee hojjechiifattedha
Shamarreen kun akka dubbattutti "Yeroo jalqabaa naannoon teessumakootii waan jijiidhaa maddisiisa ture. Kunimmoo uffatakoo jijiisuu jalqabe."
"Foolii badaa qaba, waan hin taanen ta'e, horiikoos waan hin taanetti facaaseera, fayyaakoos dhabeera, qaamakoo uumamaa nan jaalladhan ture," jechuudhaan murtee isheetti gaabbitee dubbatti.
Teessuma furdifachuudhaaf giddu-galeessaan dolaara kuma 13 ykn qarshii Itoophiyaa kuma 358 barbaachisa.
Dubartiin akka maqan ishee hin dha'amne barbaaddu tokko ammoo teeesuma ishee furdifachuuf jecha gara Turkiin deemte sababiin isaas gatiin isaa kan biyya Ingiliziirra gadi bu'aa waan ta'eef.
Goodayyaa suuraa Wallaansa teessuma furdifachuu
Dubartoonni teessuma isaanii furdifatan keessaa dhibbentaa 50 kan ta'an gara biyya Turkii kan deeman yommuu ta'u kanneen gara Hangaarii, Beeljiyeemiifi Ispeen deemanis jiru.
Dubartoonni gatii gadi bu'aatiin baqaqsanii hodhuu kan taasifatan duraan dursa waliigaltee dirqamaan mallatteessan qabu. Wallaansa akkasii kanas miidiyaalee hawwaasumaa irratti kan balaaleffatan ykn akka jibbamu taasisan yoo ta'e yakka maqaa balleessuutiin himatamuun akka isaan eeggatu walii galu.